Amazing poster outside Raffles City
Once uponatime in Singapore, there isaenormous shopping center called Raffles City which heldacolorful vinyl poster outside of its wall is located at the heart of the island state. As it is located in very important place, thousands and thousands of people passed trough in front of the building every week and observed the strange picture and murdered 'Splendid' soon after they gazed and found out the awe of it.
တစ်ချိန်တုန်းက စင်ကာပူဆိုတဲ့ ကျွန်းနိုင်ငံလေးရဲ့ မြို့လယ်မှာ သိပ်ကိုကြီးမားတဲ့ Raffles City လို့ အမည်ရတဲ့ Shopping Center အကြီးကြီးတစ်ခုရှိသတဲ့။ အပတ်စဉ် လူထောင်ပေါင်းများစွာတို့ဟာ အဲဒီဆိုင်ကြီးရဲ့ အပြင်ဖက် နံရံမှာ အရောင်အသွေးစုံလင်လှတဲ့ Vinyl Poster ကြီးတစ်ခုရှိကို ဆိုင်ရှေ့က ဖျတ်သွားငေးကြည့်လေ့ရှိပြီး ဒီ Poster ကြီးရဲ့ ထူးဆန်း အံသြဖွယ် အလှတရားကို တွေ့ရှိပြီနောက် လူတိုင်းက "သိပ်ကို အံသြစရာကောင်းပါလား" ဆိုတဲ့ စကားကို ရေရွတ်လေ့ရှိကြသတဲ့။
This was what we saw the vinyl in our naked eyes. A boy andamouse on his left cab be seen.
အခု ပုံက သာမန် မျက်စိနဲ့ ကြည့်ရင် မြင်ရတဲ့ပုံလေ။ ကောင်လေးတစ်ယောက်ရယ် သူ့ရဲ့ ညာဖက်မှာ ကြွက်ကလေးတစ်ကောင်ရယ်ကို တွေ့ခဲ့တယ်။
The booths with red and blue mirror standing in the plaza outside of the Raffles City. You can experience the difference from the booth.
အနီရောင် နဲ့ အပြာရောင် မှန်တပ်ထားတဲ့ အခန်းငယ်လေးတွေက Raffles City ရဲ့အပြင်ဖက် မြေကွက်လပ်လေးမှာ ရှိနေပြီးခဲ့တယ်လေ။ အဲဒီနေရာက နေပြီး ထူးခြားမှုကို ခံစားလို့ရတာပေါ့။
This was what we had seen inside of the blue booth. You can see the two faces of crying men.
အခုပုံက အပြာရောင်မှန်တတ်ထားတဲ့ အခန်းလေထဲက မြင်ရတဲ့ပုံလေ။ လူကြီးနှစ်ယောက် ငိုနေပါလား ပုံကိုတွေ့ရပြန်ရော။
For the red booth the poster showed the suffering faces of two little girls.
အခုအနီရောင် ခန်းကနေကြည့်ပြန်တော့လည်း ၀မ်းနည်းနေတဲ့ မိန်းကလေး ၂ ယောက် ဖြစ်နေပြီရော။
Artist Name: Issac Montoya
Born 1963, Spain, Lives and works in Spain
အနုပညာရှင် အမည် အိုင်းစက် မွန်ထိုယ
၁၉၆၃ ခုနှစ် စပိန် နိုင်ငံတွင်မွေးဖွား၍ ထိုနိုင်ငံတွင် နေထိုင် အလုပ်လုပ်
Fantasmas (Phantoms), 2008
This work by Issac Montoya,arainbow-colored potrait ofayoung woman screams fromalarge scale photograph. Layered in withing are two more images that are revealed once one looks through red and blue filters. The intial image is one taken from our consumer laden culture, familar, friendly. The hidden image reference the tragedy present in other place around the world.
မိန်းကလေးငယ်တစ်ဦး အော်ဟစ်နေသော သက်တံရောင်စုံ ဓါတ်ပုံကြီးကို အိုင်းစက် မွန်ထိုယ ကဖန်တီးပါသည်။ ထိုပုံထဲတွင်ရှိသော အလွှာများထဲတွင် ပါဝင်သော ဓါတ်ပုံ ၂ ပုံ ကို အပြာရောင် နှင် အနီရောင် အပြားများ ခံပြီး ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ နဂိုမူလ ဓါတ်ပုံမှာ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ ပျက်ဆီးသော ယဉ်ကျေးမှု၊ အကျွမ်းတ၀င်ဖြစ်မှု နှင့်ခင်မင်ရင်နှီးမှု အားစားသုံးသူ ဖြစ်ပြီး။ ဖုံးကွယ်ထားသော ပုံ ၂ ပုံမှာ ကမ္ဘာအရပ်ရပ်မှ ၀မ်းနည်းဖွယ် အဖြစ်အပျက်များကို ကိုယ်စားပြုသည်။
စင်ကာပူရဲ့ အလုပ်အပြောင်း အရွှေ့ ရာသီ
English and Burmese Proverbs